Gmail ရဲ့ Security new features အသစ်ဖြစ်တဲ့sign out — MYSTERY ZILLION
Gmail ရဲ့ Security new features အသစ်ဖြစ်တဲ့sign out
sign out တဲ့သိသားပဲ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားဟုတ်ပါတယ် ဒီsign out က sign out တော့sign out ပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး အာရှုပ်ကုန်သွားပြီထင်တယ်
အင်းဒီလိုခင်ဗျ Google က security new feature အသစ်တခုပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါက ကိုယ်သုံးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလေးကြိမ်ထိ အကောင့်ကိုပိတ်လို ့ရပြီဆိုတာပဲ ကိုယ်အကောင့်ကိုsign out ခဏခဏမလုပ်မိတဲ့သူတွေအတွက်တော့သတင်းကောင်းပဲ ကိုယ်အကောင့်ကိုမပိတ်မိတဲ့သူတွေတစ်နေရာရာကနေလှမ်းပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် တလက်စတည်းpassword ပါပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်က Gmail ရဲ့အောက်ဆုံးနားလေးမှာDetail ဆိုတဲ့စာလေးရှိပါတယ် click လုပ်လိုက်ပါ အဲ့ဒီအခါမှာ box လေးတခုကျလာပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီမှာကို်ယ်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့IP address တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အပြင်တစ်နေရာရာကနေကိုယ်အကောင့်ဟာပွင့်နေမယ်ဆိုရင် လည်းဖော်ပြပေးထားမှာပါ အဲ့မှာတစ်ခါတည်းပွင့်နေရင်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲအကောင့်လေးခုကိုတပြိုင်နက်တည်းsign out လုပ်ပေးသွားမှာပါsign out all other sessionsကိုclick လိုက်ရင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ
ဒါပါပဲ Gmail ရဲ့security new feature ပါ
thank you ko yannaingaung .:67:
this is really useful for me .
yannaingaung wrote: »
sign out all other sessionsကို လုပ်လိုက်ရင် ... ဘယ်နေကဘဲအဲဒီအကောင့်၀င်နေ၀င်နေ ... ပိတ်သွားမယ်ပေါ့... ဒီလိုလား ... ဒီလိုဆိုရင် ... အဲဒီအကောင့်ကို ... Remotely လှမ်းပြီးပိတ်လို့ ရတယ်ပေါ့... စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ...
အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအမံပဲ စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ Feature ပါ။ အဲဒီက IP တွေကို ဘယ်ကလဲသိချင်ရင်တော့ ဒီကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။
:39: မန္တလေးက internet ဆိုင်တွေမှာ ဘယ် ip address ကိုသုံးလဲဗျ
Bagan Cybertech Teleport, Internet Service Provide နှစ်ခုစလုံးကိုတွေ့ရလို့
ဒါမျိုးကို ဒီဖိုရမ်ထဲမှာ အရင်က ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။